DID: April 2008
Posted by Democratic Information Department at 8:47 AM0comments Links to this post
New Mon State Party say VOTE NO
ရက်စွဲ - ၁/ ၅/ ၀၈
လှယ်တွေက ရေးထားတာ ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေ တကယ့်အနည်းစုဘဲ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တင်ပြချက်တွေဟာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် မွန်ပြည်သူလူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ကန့်ကွက်မဲ ထည့်ကြဖို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက နှိုးဆော်တိုက်တွန်းပါတယ်။
Posted by Democratic Information Department at 8:08 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 7:00 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 8:44 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 12:24 AM 1 comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 11:35 PM0comments Links to this post
ရန်ကုန်မြို့ မှဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးဂေဇက် သို့ပေးပို့လာသောသတင်းများအရ
ရန်ကုန်မြို့ သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်းသိရသည်။
Posted by Democratic Information Department at 8:19 PM0comments Links to this post
ရွှေတံဆိပ်ဆုကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချီးမြှင့်ရန်သဘောတူလိုက်သည်
တော်လှန်ရေးစတင်ချိန်အပြီး၂၀၀၇ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၇နေ့တွင်တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလားမား
မြန်မာပြည်သူလူထုတရပ်လုံးမှလည်းများမကြာမှီကျင်းပတော့မည့်မေလ(၁၀)ရက် နအဖ၏ အခြေခံဥပဒေ
Posted by Democratic Information Department at 12:20 AM0comments Links to this post
ပြည်တွင်းပြည်ပ NO ထားကြ
Posted by Democratic Information Department at 1:31 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း Vote NO လို့ပြောပါတယ်
2008-Motto: ပုရစ်ဖူးတို့ နွေမှာဝေ၊ စစ်ဘီလူးတို့ မေမှာသေ
1990-Motto: ငုနှင့်ပိတောက် နွေမှာလှိုင်၊ စုနှင့်ခမောက် မေမှာနိုင်
( From: C-Box-Niknayman's blog)
Posted by Democratic Information Department at 8:31 AM0comments Links to this post
ယမန်နေ့ဧပြီ၂၀ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်ည ၇း၅၅နာရီတွင်ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်၃၆လမ်းထောင့်ABCစားသောက်ဆိုင်ရှေ့ရေမြောင်းတွင်း၌ပထမအကြိမ်ဗုံးတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး၊
ည ၉း၁၅ နာရီတွင်၃၂လမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်တွင်ရပ်ထားသောဟိုင်းလပ်ကား၊နံပါတ် (ပ-၇၀၆၂)ပေါ်တွင်ဒုတိယဗုံးတလုံးထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
Posted by Democratic Information Department at 10:58 PM 1 comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 8:58 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 3:22 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 8:39 AM0comments Links to this post
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ (ဖို့ တ်ဝိန်း။အင်ဒီယားနား)နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းသ၀ဏ်လွှာ
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ(ဖို့ ဝိန်း၊အင်ဒီယားနား) နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းသ၀ဏ်လွှာ
နေ့ စွဲ၊ ၊ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၆၉ခု တန်ခူးလဆန်း (၈) ရက်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ခု။ တန်ခူးလဆန်း (၁၅)ရက်နေ့ တွင်ကြရောက်သည့် မြန်မာ့ နှစ်သစ် ကူး အချိန်ကာလ အတွင်းတွင် မြန်မာ့ ဒီိမီုကရေစီ အင်အားစုများ (ဖို့ ဝိန်း။ အင်ဒီယားနား) မှ မြန်မာပြည်သူ၊ပြည်သား တရပ်လုံးအားနှစ်သစ်ဆုတောင်းအဖြစ်
ဤနှစ်သစ်ကူး သ၀ဏ်လွှာကို ထုတ်ပြန် လိုက်ပါသည်၊
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်း သား ခေါင်းဆောင်များ။ ၂၀၀၇ ခုနုစ် စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေးမှ ဖမ်းဆီးခံနေကြရသော ရဟန်း သံဃာတော်များနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ရရှိရေး တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ဖမ်းဆီးခံနေကြသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်း လိုက်ရ ပါသည်၊
ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် မတရားရေးဆွဲထားသော ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံမူ ကို ပြတ်သားစွာ ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အတူ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲများ အမြန်ဆုံး စတင်နိုင်ရေး။ လိုအပ်လာပါက ၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှ အနိုင်ရပါတီဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်က ဦးဆောင်၍အစိုးရတရပ်ဖွဲ့ စည်းပြီး ပြည်သူ့ အာဏာကို စစ်အာ ဏာရှင်တစ်စု ထံမှ ပြန်လည်ရယူရန်လည်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
တပ်မတော်အတွင်းမှ သူရဲကောင်း မြန်မာ့တပ်မတော်သားကောင်း ခေါင်းဆောင်များ ပေါ် ထွက်လာပြီး ရဟန်း။ပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်း၍စစ်အာဏာရှင်စနှစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး။ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ ထွန်းကားသည့် နိုင်ငံတော် သစ်တရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးမှာ အလွန်ပင်အရေးပါ လှပါ သည်။
နိုင်ငံတကာရှိ မိသားစုများမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ စစ်အာဏာရှင်နှင့် ယင်းတို့ တည်မြဲရေး အတွက် အကာအကွယ်ပေးနေသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအား ပြတ်သားစွာ။ ဖိအားပေး အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရေးများ အလျင်အမြန်ဖြစ်ပေါ်ရေးမှာ အထူး လိုအပ် နေပါသည်၊
စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲမှု၊ လူမှု၊ဒုက္ခအ၀၀ဘေးမှ မြန်မာပြည်သူများ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ရန်နှင့် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများတွင် ၀မ်းစာ အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ကိုင်နေ
ကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ အန္တရယ်အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်နိုင်ရေးအတွက်ဆုတောင်း
မေတ္တာပို့ သလိုက်ရ ပါသည်၊
အမျိုး။ ဘာသာ။ သာသနာ ထွန်းကားသည့် အပြင်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ကြ သော လူမျိုးးမရွေး။ ဘာသာမရွေး။ တန်းတူရည်တူ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးစွာ အတူတကွ နေထိုင်နိုင်သည့် နိုင်ငံတော်သစ်ပေါ်ပေါက်လာသည့်တိုင် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော ပြည်တွင်းပြည်ပအင်အားစုများနှင့် အတူ ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမည့်အကြောင်း မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးသို့နှစ်သစ်ကူး သ၀ဏ်လွှာကို ပေးပို့ လိုက်ရပါသည်၊
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ (ဖို့ ဝိန်း ။ အင်ဒီယားနား)
Posted by Democratic Information Department at 1:15 AM 1 comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 2:50 AM0comments Links to this post
"One World, One Dream. Free Tibet" and "Free Tibet '08."
လုံခြုံရေးအရာရှိများမှအဓ္ဓမဖယ်ရှားခြင်းမပြုခဲ့ဘဲ မွန်းလွဲ ၁နာရီခန့် တွင်ဆန္ဒပြသူများကြိုးတံတားကြိုး
Posted by Democratic Information Department at 11:49 PM 1 comments Links to this post
မန္တလေးမှဧပြီ ၅ရက် နေ့တွင်ပေးပို့လာသောသတင်းအရ အသက်(၉၃)နှစ်ရှိစာရေးဆရာမကြီးလူထုဒေါ်အမာ
အမေဟုမြန်မာစာပေလောကကချစ်မြတ်နိုးစွာခေါ်ကြသော အမေဒေါ်အမာ၏ရုပ်ကလာပ်အား ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၉)ရက်မနက်(၁၀း၀၀)နာရီတွင်ကြာနီကန်သုသာန်တွင်ဂူသွင်းသဂြိုလ်မည်ဟုသိရှိရပါသည်။
Posted by Democratic Information Department at 1:23 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 5:29 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 1:21 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 1:04 PM0comments Links to this post
ပြည်ထောင်စု ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ဖို့တ်လောရာဒေးမြို့ ရှိ Florida Medical Center ဆေးရုံ၌ အဆုတ်နှင့်
နှလုံးရောဂါအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်း ဧပြီလ ၃ ရက်၊၂၀၀၈ခုနှစ် ဒေသစံတော်ချိန်ည ၁၀း၀၀နာရီခန့်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းမိသားစု၏အတည်ပြုပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။ကွယ်လွန်သူ၏ဆန္ဒ
Posted by Democratic Information Department at 1:04 PM 1 comments Links to this post
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ယူတားပြည်နယ်၊ဆော့လိပ်စီတီး၊ South Parc apartment ၌
မတ်လ၃၁ ရက်တနင်္လာနေ့ တွင်အသက်(ရ)နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံဖွားကရင်သမီးးငယ်တဦး
သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်ကလေးမလေး၏အမည်မှာဆာနေမူးဖြစ်ပြီး သူမမိသားစုမှာ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လတွင်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှတဆင့်အမေရိကန်အစိုးရ၏
CNN HEADLINE NEWS ဗီဒီယိုကြည့်ရန်
Posted by Democratic Information Department at 7:55 PM0comments Links to this post
ကျွန်တော်တို့DID တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုချိုတူး(ဆောင်းယွန်းလ)၏ချစ်ဇနီးမူမူအေးမှမတ်လ၂၈ ရက်၊၂၀၀၈ခုနှစ်၊သောကြာနေ့ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ ၅း၀၀နာရီတိတိတွင်သားရတနာဖွားမြင်ခဲ့ပြီးမိခင်နှင့်ကလေးနှစ်ဦး
စလုံးကျန်းမာလျက်ရှိကြောင်းရပ်ဝေး၊ရပ်နီးနေရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်မိသားစုဝင်များသိစေရန်DIDရဲဘော်များမှ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာသတင်းစကားဆိုအပ်ပါသည်။သားသားလေးရဲ့အမည်ကို"သောမတ်စ်သူရိန်လင်း" လို့
Posted by Democratic Information Department at 11:29 PM 1 comments Links to this post
နအဖစစ်အာဏာရှင်များမတရားရေးဆွဲထားသော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ဆန္ဒခံယူပွဲ
အဖွဲ့ချုပ် (NLD)၏ ပြတ်သားသောတိုက်ပွဲဝင်မှုပုံသဏ္ဍန်အားမျှော်လင့်နေသည့်ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးနှင့်မြန်မာ့
" လူထုလူတန်းစား အလွှာအသီးသီးမှ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအားလုံးနဲ့ အဖွဲ့အစည်းများက သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံများသို့ မပျက်မကွက် သွားရောက်ကြပြီး ကန့်ကွက်မဲကို ကြက်ခြေခတ်ခြင်းဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသား၊ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်၊ "
Posted by Democratic Information Department at 11:13 AM0comments Links to this post
Beijing 2008 Torch Relay Truth!
International Olympic Committee (IOC) ကိုစာပို့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့
Posted by Democratic Information Department at 11:48 PM0comments Links to this post